Hetsika efa natomboka tamin’ny voalohandohan’ny volana jolay izy ity mba hanentanana ireo Malagasy rehetra hiray fo amin’ireo mpilalao basket ball, izao ho avy hanafika antsika amin’ny 17-28 aogositra ho avy izao, etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena. Andraikitra noraisin’ny orinasa Telma sy fampahafantarana izany amin’ny maha mpanohana ofisialy azy ireo.
Fifaninanana eny anivon’ireo tanàna holalovany amin’ny alalan’ny lalao basket lalaovin’olona telo na ny Fiba 33 miampy ireo fanentanana hiarahana amin’ny Dago Mix Club (DMC) sy ny fifaninanana handraisan’ireo mpijery anjara no hanamarika izany “Afrobasket Tour” izany.
Tanàna maro no efa nolalovan’ity hetsika ity toa an’Antsirabe, Fianarantsoa, Ambilobe, Ambatondrazaka ary ireo faritra manodidina an’Antananarivo. Ny 13 aogositra no hamaranana izany, amin’ny alalan’ny filaharambe manodidina ireo Boriborintany eto Antananarivo renivohitra.